Iwo akanakisa emulators eRaspberry Pi | Mahara emahara
Iwo akanakisa emulators eRaspberry Pi
Kune akawanda mafeni e retro kana echinyakare mitambo. MaGamers akararama mumazera egoridhe ezvengano mavhidhiyo ekunyaradza akadai seAtari, kana arcade bartop mitambo kubva kumakadhi nemabhawa, kana avo vakabata nhoroondo dzemakomputa senge Commodore64, Spectrum, nezvimwewo, vacharamba vachingova neiyo bug yekushandisa . emulators kumutsidzira iyi inozivikanwa vhidhiyo mitambo.
Kunyangwe iwe usina kurarama munguva idzodzo, asi iwe une shungu nezvevaraidzo yedhijitari, iwe unofanirwa kuziva kuti neiyo Raspberry Pi unogona kugadzira kamuri yemutambo, imba yekutandarira uye zvakachipa kwazvo. Kunyangwe iwe uri mugadziri uye iwe unoda DIY, iwe unogona kuita zviitiko zvinonakidza kuteedzera aya makomputa, zvinonyaradza kana michina yeyakare ...
1 Hardware: Iyo Raspberry Pi yakashandura iyo retro indasitiri yemitambo
2.1 Iwo akanakisa emulators eRaspberry Pi
2.1.9 VICE (Anodzvinyirira Commodore Emulator)
2.2 Zvimwe zviwanikwa
Hardware: Iyo Raspberry Pi yakashandura iyo retro indasitiri yemitambo
Iyo Raspberry Pi yasvika shandura chikamu yedzidzo, DIY, uye zvakare yeye retro yemitambo. Neiyi SBC diki unogona kuunganidza imwe kana yakawanda michina yemitambo ye retro nenzira yakapusa. Mamwe emasimba ePi achienzaniswa nemakomputa akajairwa ndeaya:
Mutengo wakachipa: Raspberry Pi yakachipa, nekuti ingodarika € 30 unogona kutenga rimwe remabhodhi aya, uye nekuwedzera zvishoma iwe unogona zvakare kutenga zvimwe zvishongedzo senge iyo SD kadhi kwaunogona kuchengeta iyo inoshanda system iyo iwe yauri kuzoisa uye ivo emulators, mitambo yemavhidhiyo, zvirongwa, nezvimwe. Kune mamwe akawanda makiti akazara aunogona kutenga nemutengo wakaderera uye izvo zvatoratidza zvese zvaunoda kugadzira yako pinball muchina, imba arcade muchina, kana retro koni ...
Raspberry Pi 4 Muenzaniso B - B07TD42S27
Raspberry Pi 3 Muenzaniso B - B01CD5VC92
Raspberry Pi Yakazara Kit - B07ZV9C6QF
BarTop Replica Arcade Muchina nePi - B0813WHVMK
JAMMA uye vatyairi varipo: mumusika iwe unowanawo yakawanda nhamba yevanodzora vanoteedzera izvo zveanyaradzo ekare, akadai seNintendo yeNES, kana makesi nemakiti anotendera iwe kuti ugadzire inotakurika koni nenzira yakapusa kwazvo. Mutengo wavo wakachipa kwazvo, uye vanounganidzwa zvirinani nekutenda kumaPi maGPIO kune mamwe mapurojekiti anogona kukubatsira kupedzisa yako vhidhiyo mutambo system.
Mutambo weGamePad yePi - B07TB3JTM2
Joysticks uye Bhatani Kit yeArcade Machine neiyo Pi - B07315PX4F
iNNEXT retro controller mhando Nintendo64 yePi - B075SYJTF7
iNNEXT 2 Classic SNES Vanodzora vePi - B01EA7MVTQ
EG INOTANGA Arcade joysticks uye mabhatani kit - B07B66W25M
EG INOTANGA 2 arcade joysticks uye mabhatani kit - B01N43N0JB
Screens kusarudza: iyo skrini, kunyange maCRTs ekare asingawanikwe, chimwewo chinhu chaunogona kutenga zvakachipa uye sarudza zviyero izvo zvainofanirwa kuve nazvo. Kune mamwezve ekubata masikirini akanyatsogadzirirwa iyo Raspi, kunyangwe iyo kune emulators uye mitambo yeRetro isiri iyo yakakodzera kwazvo. Zvirinani kushandisa imwe yeIPS LCD skrini dzavanotengesa kune ino SBC. Kana kunyange batanidza hob yako kuimba yekutandarira TV kana yekutarisa, zvinoenderana nemhedzisiro yekupedzisira iwe yaunoda kuwana.
4.3 "Raspberry Pi TFT Ratidza Module - B07FD94BQW
3.5 "Bata Screen yeRaspberry PI - B07Y19QQK8
Modularity uye kuchinjika: pamusoro pezvese zvataurwa pamusoro, unogona kusarudza zvaunoda kuwedzera kumuchina wako wevaraidzo, mhando yeimba yaunoda kuisa pairipurinda mu 3D, gadzira kubva mumatanda kana zvimwe zvinhu, penda, tenga yatogadzirwa,…), sarudza zviyero zvechidzitiro, mhando yemadhimoni auchazoshandisa, nezvimwe.
Retro kesi inoteedzera Nintendo NES koni yePi - B0787SZXMF
Waveshare Hat yePi Kugadzira Inotakurika Console - B07G57BC3R
Waveshare kit kugadzira yako GamePi - B07XHQMNPC
Waveshare Hat yePortable Console Pi - B07PHZ1QNZ
Uye izvo usingakanganwe kuti iwe unogona sanganisa simba reRaspberry Pi nemamwe mapurojekiti yemahara Hardware senge Arduino, pamwe nekuwanda kweheti, zvimwe zvigadzirwa, nezvimwe.
Kunze kweiyo Hardware, zvakare unoda software kuti ukwanise kumhanyisa mitambo yemavhidhiyo retro pane yako Raspberry Pi, sezvo mazhinji eayo echinyakare mitambo akagadzirirwa mapuratifomu uye michina zvakasiyana zvakanyanya neiyo Pi yekuvaka. Kune izvo iwe unoda emulators chaizvo.
Iwe haufanire kuvhiringidza chii chinonzi emulator uye simulator. Izvo hazvisi chinhu chimwe chete, uyezve haina kufanana. Semuenzaniso, munyika chaiye iwe une mienzaniso yakati wandei yezvikamu zvese izvi, senge QEMU senge emulator, iyo F1 2017 mutambo wevhidhiyo senge ngoro simulator, uye WINE seyakaenderana inoenderana.
Un simulator Iyo sisitimu inoitwa mu Hardware kana software iyo yakangotsaurirwa kudzoreredza nharaunda kana kuburitsa maitiro ehurongwa chaihwo. Chinhu chisina zvakawanda zvine chekuita neiyo emulator, sezvo emulator iri software kuitisa iyo inoedza kuita iyo vhidhiyo mutambo kana chirongwa kufunga kuti iri kumhanya pane yakasarudzika chikuva.
Ndinoreva emulators vanoshandisa Hardware uye inoshanda sisitimu yemuchina iyo ivo yavanoda kutevedzera kuitira kuti software yemuno yeplatform iyi iitwe pane chaiyo hardware uye system. Semuenzaniso, iyo Hardware uye system yaive muAtari 2600, kana Spectrum, haina chekuita neARM-based Hardware yeRaspberry Pi.
Panzvimbo iyoyo, neaya emulators dura inogadzirwa iyo "Dudziro" mirairo uye mafoni kune iyo system inodikanwa kumhanyisa mutambo kuitira kuti ugone kumhanyisa paPi yako sekunge yaive yechizvarwa muchina. Kune izvo, emulator inoda kudzokorora maitiro eCUU, ndangariro, I / O, nezvimwe, zveconsole, komputa, kana arcade muchina.
Pakati pevamiririri varipo veiyo Raspberry Pi uye iyo iwe yaunogona kumhanya nayo yemavhidhiyo mitambo uye maROM aunotora, vanogona kumira zvimwe zvinonakidza senge:
Icho chimwe chezva unofarira zvakakwana masystem kune vanoda retro mitambo. Inoenderana neRaspberry Pi, Odroid, uye mamwe mapuratifomu. Iyo yakavakirwa paRaspbian, uye inovaka yakakwana emulation chiteshi kuti iwe ugone kunakidzwa neyako aunofarira mitambo zvisina simba, iwe uchitova nazvo zvese zvakabatanidzwa uye neakasiyana siyana ekugadzirisa uye ekugadzirisa maturusi.
Kana iwe uchinetseka nezve iyo akatsigira emulators, une Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Jaguar, Atari Lynx, Atari ST, Atari STE, Atari TT, Atari Falcon, Commodore 64, Commodore VIC-20, Commodore PET, Dragon. 32, FinalBurn Neo, Famicom, GameCube, Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Ruvara, Macintosh, MAME, Sega SD, MegaDrive, NeoGeo, NeoGeo Pocket, Nintendo 64, Nintendo DS, NES, SNES, DOS, PlayStation Ini, PlayStation 2, PSP, Sega 32X, Nintendo Wii, ZX-81, ZX Spectrum, nezvimwe.
Lakka Iyo yakazara inoshanda sisitimu iyo inosanganisira zvese zvaunoda pamitambo yeRetro uye inoenderana neiyo Raspberry Pi bhodhi. Iyi isingaremi Linux distro ine yakapusa uye ine hushamwari interface uye inokurumidza. Pakati pevamiririri vaunogona kunakirwa ndeaya eSega, Nintendo NES, SNES, Game Boy, PlayStation, PSP, Atari 7800, Atari 2600, Jaguar naLynx, Game Boy Advance, Game Boy Ruvara, MegaDrive, NeoGeo, Nintendo 3DS, Nintendo 64, Nintendo DS, nezvimwe.
RecalBox Iyo yakazara system kuitira kuti iwe uve neakakura multimedia uye varaidzo nzvimbo zvese mune imwe chete. Iyi imwe nzira inonakidza kune yakapfuura, nekuti pamusoro penzvimbo ine emulators yemitambo yemavhidhiyo, zvakare inosanganisira yakazara system yekumisikidza muyananisi. Naizvozvo, zvakanaka kana iwe uchida kubatanidza Raspberry yako Pi kune yako yekutandarira TV.
Pakati pe livo emulators ayo atove anosanganisira Nekutadza, iwe unozogona kunakidzwa nemitambo yeRetro yeNES, SuperNintendo, Master System, PlayStation 1, Genesis, GameBoy, Game Boy Advance, Atari 7800, Game Boy Ruvara, Atari 2600, Sega SG1000, Nintendo 64, Sega 32X, Sega CD, Lynx, NeoGeo, NeoGeo Pocket Ruvara, Amstrad CPC, Sinclair ZX81, Atari ST, Sinclair ZX Spectrum, DreamCast, PSP, Commodore 64, nezvimwe.
batocera chirongwa chinoshandisa anoshanda sisitimu mukudzokorodza. Inoenderana neRaspberry Pi uye zvakare nemamwe maSBC akafanana naOdroid.
Iyi yakazara system inosangana hombe emulators, Achiita yakanaka yakanaka sarudzo kune maviri apfuura. Izvo zvinokutendera iwe kumhanya mitambo yeRetro kubva kuNintendo 3DS, Commodore Amiga, Amiga CD32, Amiga CDTV, Amstrad CPC, Apple II, Atari (2600, 5200, 7800, 800, ST, Lynx, Jaguar,), Atomiswave, Commodore 128, Commodore VIC- 20, Commodore 64, DOS, Sega DreamCast, Nintendo Game Cube, Gambe Boy, Game Boy Advance, Game Boy Ruvara, Sega Game Gear, Amstrad GX4000, MAME, Sega Megadrive, Nintendo 64, Nintendo DS, NeoGeo, NES, PlayStation 2, Sony PSP, PlayStation 1, SNES, ZXSpectrum, Nintendo Wii, nezvimwe.
Ndicho yakapusa emulator yeMS-DOS anoshanda masisitimu kuitira kuti iwe ugone kudzoreredza zvinogoneka zvechinyakare zvirongwa uye vhidhiyo mitambo papuratifomu iyi. Iyo yakaiswa senge chero imwe homwe kubva kumatura ekugovera kwako kwePi. Kamwe yaiswa zviri nyore kushandisa uye nemirairo mishoma yakapusa unogona kumhanyisa software yemuno yeiyi chikuva chekare.
Wedzeredza ndeimwe Eltechs Software emulator yakagadzirwa kuti ikwanise kumhanyisa software senge mitambo yemavhidhiyo pane x86-yakavakirwa mapuratifomu. Icho chirongwa chakabhadharwa, asi chinokutendera iwe chimwe chinhu kugadzikana uye yakapusa pane kushandisa QEMU kugona kumhanyisa software isina kunyorwa yeArM pane maSoC eRaspberry Pi.
Iyo yakavhurika sosi yekumisikidza yeLinux iyo inobvumidza iwe kunakirwa muropa uye yakawanda yemavhidhiyo mitambo ye iyo inozivikanwa NeoGeo. Inoiswa nyore nyore uye unogona kunakirwa nezviri mukati nekukurumidza. Nemazita akadai Mega Slug, SpinMaster, Rwendo rweBlue, Street Hoop, Blazing Star, NAM-1975, Art of Fighting 2, nezvimwe.
Pamwe chete neCommodore, imwe yemapuratifomu engano iri yakakurumbira Spectrum. Kana iwe uchida kupa emavhidhiyo mitambo yechipiri hupenyu kune ino nhoroondo timu, unogona kushandisa iyo ZXBaremulator emulator inounza iwe yakazara isina-simbi emulator (chirongwa chisingade iyo inoshanda sisitimu yekushandira) yeRaspberry Pi. Inopa Zilog Z80 uye dhizaini yemachini aya kuti aenderane neZX Spectrum 48K, 128K uye + 2A.
VICE (Anodzvinyirira Commodore Emulator)
VICE kana Combian64 Iyo ndeimwe yeanobudirira emulators, nekuti inogona kumhanya pane akawanda mapuratifomu, kusanganisira yako Raspberry Pi yekumisikidza yakazara emulator yeakakurumbira C64, C64DTV, C128, VIC20 uye ese maPET, pamwe nePLUS4 uye CBM-II. Kana iwe uchida kumutsidzira software yeiyi chikuva, uye yayo vhidhiyo mitambo, iwe uchafarira iyi emulator ...
Icho chimwe chishandiso chaunogona kuisa pane yako Raspbian yeRaspberry Pi nemaneja wepakeji. Kamwe yaiswa, uchishandisa iyo koni iwe unogona kumhanyisa yako maROM nenzira yakapusa, kunyangwe isina GUI inogona kunge yakaoma zvakanyanya kana kushomeka kune vanotanga.
Imwe yei emulators yeAtari iyo yauinayo ndeye Atari ++ chirongwa. Mune ino kesi, iri chirongwa chakanangana neUnix uye icho chakanangana nekukuunzira nyaradzo senge Atari 400, 400XL, 800, 800XL, 130XE, kana iyo 5200. Pamusoro pezvo, inozvigadzirira wega kuumbiridza kune yako chikuva, kukupa iwe yakawanda nhamba yemabasa.
Iyo imwe inotonhorera emulator inoshanda paRaspberry Pi futi, zvakadaro haina kukurudzirwa kune newbies. Inoda seti uye nhanho nhanho dzinogona kuve dzinonyengera kune vasina ruzivo.
Iyo purojekiti inomuka se Libretro API, yekumberi-kumagumo emulators uye mitambo yeRetro iyo ichakubvumidza iwe kumhanyisa aya emavhidhiyo ...
Kana iwe uchida tora mitambo yemavhidhiyo, kune mamwe mawebhusaiti anonakidza aunofanirwa kuziva. Ramba uchifunga kuti emulators zviri pamutemo zvachose, asi nzira yekuti iwe unowana sei maROM emitambo yemavhidhiyo inogona kunge isingave. Mimwe mitambo inogona kuwanikwa yemahara, mimwe pachinzvimbo iwe uchafanirwa kuvabhadhara kana kuitisa pirate. Asi iri ibasa rako, nekuti HardLibre haikurudzire utsotsi hwerudzi rupi rwe software.
Pakati pevamwe mawebhusaiti uko kwaunowana idzi mhando dzevhidhiyo mutambo weROM uye zvinogoneka, Ndinokukurudzira kuti uongorore zvinotevera:
RGB Classic Mitambo
Ini zvakare ndinokuraira iwe kuti utarise iyo dandemutande Internet Archive, hombe dura rezvose zvakapfuura zve network yemasaiti uko kwaunowana ruzivo rwakatumirwa uyezve nezvimwe zvakawanda zvirongwa zve retro nemitambo yemavhidhiyo.
Ndinovimba ne zvese izvi zvinhu iwe unogona kuwana zvakakwana kune rako ramangwana retro vhidhiyo mutambo muchina ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Iwo akanakisa emulators eRaspberry Pi
Yakanaka dzidziso, ini ndanga ndakatarisa arcade fenicha, tutorials uye zvikamu zvekugadzira arcade muchina, asi ini ndakawana kambani inovagadzira uye inodhura zvakanyanya kwandiri kuti ndiitenge kubva kwavari. Ndinokurudzira kuti kana zvikaitika kwauri seni, iwe tenga michina yeArcade inotakura iyo yese uye kana iwe ukawana mugadziri akanaka unogona kuiwana nemutengo wakanaka kwazvo uye mhando yakanaka kwazvo. Ini ndakatenga yangu paMERCAPIXELS uye ini ndinovarumbidza iwo 100%. Ini ndinokusiira iwe iyi link kana iwe uchida kutarisa, vane michina mikuru pamutengo une hutsinye. http://www.mercapixels.com
Arduino Mega: zvese nezve hombe bhodhi rekuvandudza
Arduino UNO- Yakakwana yemahara Hardware bhodhi scan